4 elephants die of poachers' cyanide poisoning in Zimbabwe
HARARE, Zimbabwe — Four elephants have died from cyanide poisoning in Zimbabwe as poachers take advantage of a dry spell to contaminate remaining water sources. Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority spokesman …
But Mnangagwa's supporters allege he was struck down by poison-laced ice cream produced on a farm owned by first lady Grace Mugabe. The pair have been locked for months in an increasingly bitter war of words over who should replace …
Montreal, QC -- (SBWIRE) -- 01/12/2018 -- Johnny Rodrigues, founder and chairman of the Zimbabwe Conservation Task Force ... We need veterinarians and conservationists. When elephants are killed by cyanide poisoning the entire eco …
More elephant poaching in Zimbabwe
At least 19 elephants have been poached through cyanide poisoning since June in Zimbabwe’s biggest game park where drones were deployed last year to help deter poachers. A tally from the Zimbabwe Parks and Wildlife Management …
Hwange national park in western Zimbabwe currently hosts 53,000 elephants, twice the park’s carrying capacity. 14 elephants die of poisoning in Zimbabwe: officials Park rangers recovered most of the tusks after the 23 elephants were …
Zimbabwe: Four Elephants Suspected Poisoned With Cyanide in Zimbabwe
A hunter in western Zimbabwe has found the carcasses of four more elephants believed to have been poisoned by cyanide, according to a newspaper report on Monday. The elephants were found on Friday along the Manzamnyama River in …